Mareykanka oo sii wadaya tallaabooyinka looga hortegayo Coronavirus – Geelle Magazine
Mareykanka oo sii wadaya tallaabooyinka looga hortegayo Coronavirus
Daraasad ay samaysay Jaamacadda Harvard ee dalka Mareykan ayaa tilmaamaysa in Mareykanku uu sii wadayo adeegsiga sharciga mamnuucaya isu dhowaan-shaha bulshada, isla markaana uusii shaqayn doono ilaa inta laga gaarayo sanadka 2022-ka, iyadoo ujeedaduna tahay xakameynta faafitaanka Cudurka safmareenka ah ee Corona oo si xoog leh u saameeyey dunida gaar ahaan dalka Mareykanka.
Sharciga kala fogaanshaha dadka ayaa laga maarmi doonaa haddii ay sii xoogaysato awoodda Mareykanku u leeyahay ka hortagga fayraska Corona ama la helo daawo ama tallaal looga hortegi karo cudurkan.
Jaamacadda Harvard waxay tusaale usoo qaadatay tallaabooyinka ay qaateen dalalka South Korea iyo Singapore, iyagoo si adag u hirgeliyey kala fogaanshaha bulshada iyo in la xayiro dhamaan goobaha la isugu yimaado. Jaamacadda waxay sidoo kale tilmaamtay in Mareykanku uu u baahan yahay inuu sii adkeeyo ku dhaqanka tallaabooyinkaas oo kale.
Daraasada Jaamacadda Harvad ee Mareykanka waxaa sidoo kale lagu tilmaamay in saameynta Coronavirus uu u gaystay dalka Mareykanka iyo guud ahaan caalamka kale ay u badan tahay in ay cawaaqib xumo dhaqaale oo caalamka wada gaarta ay ka dhalan karto, haddii aan si adag loola dagaalamin oo aan lasoo afjarin fayraskan.
Shiinaha oo koox Dhaqaatiir ah usoo direysa Afrika